राजनीति - Chinari Post
असार १४,२०७९ / ०८ : २२ अपरान्ह / 2022-06-28 08:22 pm
काठमाडौं सभामुख कृष्णबहादुर महराले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । आइतबार राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा दौरा सुरुवालमा सजिएर महराले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएका हुन् ।माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दाङको क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
आज विश्वासको मत लिने तयारीमा सरकार
राजपाको समर्थनसहित सरकारको पक्षमा १९४ सांसद –
काठमाडौं,प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ समर्थन देखिएको छ । सरकारले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका वेला ओली नेतृत्वको सरकारको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये कम्तीमा १ सय ९४ सांसदको समर्थन देखिएको हो ।
दुईतिहाइका लागि १ सय ८२ मत आवश्यक पर्छ । तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको अहिलेसम्मको निर्णयका आधारमा ओली सरकारको पक्षमा दुईतिहाइभन्दा १२ मत बढी देखिएको छ ।
कसरी चल्छ प्रदेश सरकार ? कहाँबाट जुट्छ स्रोत ?
मन्त्रीहरु भन्छन्: पैसाले प्रदेशमा समस्या हुँदैन
काठमाडौं: प्रदेश सरकारले कसरी जुटाउलान् आर्थिक श्रोत ? सातै प्रदेशमा सरकारले काम थालेपछि अहिले आर्थिक मुद्दा प्रमुख भएर आएको छ। प्रदेशका मुख्मन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुका कार्यकक्षमा विकास योजना माग्नेको लाइन लागेको छ ।
जनताबाट उच्च अपेक्षा भएपछि प्रदेश सरकार अहिले दबाबमा छन् । प्रदेश सरकारले काम थालेसँगै बजेट निर्माणलाई पनि अघि बढाएकाले जनताको अपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्लान् ? त्यो प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।
राष्ट्रपति उम्मेदवारी मनोनयन
काठमाडौं : दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव र समर्थनमा राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेकी भण्डारीको प्रतिस्पर्धीमा नेपाली कांग्रेसबाट कुमारी लक्ष्मी राईले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। बुधबार राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यालय नयाँ बानेश्वर पुगेर भण्डारी र राईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी सुरुमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार राईले दर्ता गराइन् भने त्यपछि भण्डारीले उम्मेदवारी दर्ता गराइन्।
माधव नेपालसँग ‘लिफ्ट’ लिएर संसद् पुगे सिलवाल
प्रहरीको फरारको सूचीमा रहेका सांसद् एवं पूर्व डिआईजी नवराज सिलवाल सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रवेश गरेका छन् ।
उनी एमाले नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको गाडीमा ‘लिफ्ट’ लिएर संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेका हुन् ।
केहीबेरमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै, फाेरम पनि सहभागी हुने सम्भावना
गत ३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका केपी शर्मा अाेलीले अाज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन् । एमाले र माअाेवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री अाेलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन् ।
यसक्रममा संघीय समाजवादी फाेरमलार्इ पनि सहभागी गराउने प्रयास भएकाे छ । प्रधानमन्त्री अाेली, माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संघीय समाजवादी फाेरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच अाज छलफल भएकाे छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा सरकारले गरेको सिफारिस असंवैधानिकः कांग्रेस
राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यमा आफ्नो सरकारले पठाएको नाम फिर्ता लिएर अर्को नाम पठाएकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
यो संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको भावना विपरित भएको कांग्रेसले बताएको छ ।
देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको मंगलबार विहान बसेको बैठकले देउवा सरकारले गरेको सिफारिस रद्द गर्दै युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेल राईलाई पठाएको छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री अोलीको सपथ दिउँसो ४ बजे
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार दिउँसो ४ बजे सपथ लिने भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालका अनुसार सपथको समय दिउँसो ४ बजेका लागि तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा बुझाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।